शब्दकोश: उदय प्रकाश, वजन र कविता
यसै क्रममा अंग्रेजीदेखि हिन्दी साहित्यका पुस्तक र लेखरचनाहरु हिन्दीमै पढियो । केही लेखकसँग भने नेपाली अनुवादकै कृति आएपछि चिनापर्ची गर्ने संयोग मिल्यो । त्यसैमध्येका हुन्, भारतीय साहित्यकार उदय प्रकाश । केही वर्षअघि यज्ञशको अनुवादमा लघु उपन्यास 'मोहनदास' पढेपछि यी लेखकको वजन थाहा भएको थियो । केही दिन मथिङ्गल खुबै रन्किएको थियो ।
उनका अरु कृति त्यसपछि काठमाडौंका केही किताब पसलमा खोजे पनि पाउन सकिएन । त्यसपछि इन्टरनेटकै पन्ना पल्टाएर गोडाचारेक फुटकर कथा र कविता पढेर मन बुझाइयो । महिना दिनअघि उनै यज्ञशको अनुवादमा यी लेखकको कथासंग्रह 'नेलकटर' पनि आउने खबर सुनियो । थप सुनियो, पोखरामा नेपाल साहित्य महोत्सवमा कथाकृतिको लोकार्पण कार्यक्रममा लेखक आउनेछन् ।
यसै मेसोमा कविता कोश बाट यी प्रिय लेखकका केही कविता आफैंले अनुवाद गरेँ । पोखरामा उनीसँग भेट गर्ने मौका पनि मिल्यो । महोत्सवको छलफलमा उनले आफूलाई मूलत: कविकै रुपमा चिनाए । काठमाडौं फर्किँदै गर्दा यात्रामा 'नेलकटर' का कथाहरु पढेँ । 'मोहनदास' जस्तो सघन प्रभाव कथाहरुले पक्कै पारेनन् । अनि लाग्यो, उदय प्रकाश खासमा कवि नै हुन् ।
उनका केही कविताको मैले गरेको अनुवाद यहाँ राखेको छु । यी कविताहरु यसअघि अनलाइनखबर डटकममा प्रकाशित भएका थिए ।
साथी चिठीमा लेख्छन्-
‘म सकुशल छु ।’
म जवाफ लेख्छु-
हामी दुवै आश्चर्यचकित छौं ।
२. तीन वर्ष
विगत तीन वर्षदेखि जान्दछु
तीन वर्ष यति छोटो हुँदैन
जति छिटो उच्चारण गरिन्छ
कलमी बोटमा आँप फल्न थाल्छ
सामुन्नेको घरको छतमा
दिउँसो कपाल कोर्दै गरेकी युवती
कतै बेपत्ता हुन्छे
स्कूलका निरञ्जन मास्टर
काकीलाई क्षयरोग लाग्छ र
म र मेरो भाइलाई कतै जागिर मिल्दैन
हाम्रा अनुहार, प्रेमिका र आशाहरु
र निकै धेरै चिजलाई जलाउन पुग्ने
प्रशस्तै तेजाब जम्मा हुन्छ
विगत तीन वर्षदेखि बताउन चाहिरहेको छु
कि यी अखबारहरुमा
कैयौं वर्षदेखि हाम्रो बारेमा
केही पनि छापिएको छैन !
पिंजडा निकै रुष्ट छ
आकाश छ खुसी
उड्न सिक्छ ।
केही पनि सोच्दैन ।
केही पनि बोल्दैन ।
र केही नबोलेपछि
मान्छे मर्छ ।